10kii Laacib Ee Pep Guardiola Uu Ku Khasaaray Soo Iibsigooda
Pep Guardiola waxa uu ka mid ahaa macallimiiinta ugu wanaagsan dunida muddo 12 sannadood ah, waxaanu taas ku caddeeyey waqtiyadii uu ku qaatay Barcelona, Bayern Munich iyo Manchester City oo uu hadda ku sugan yahay.
Macallinkan 49 jirka ah waxa sannadaha aan sidaa u badnayn uu ku noqday mid ka mid ah tababareyaasha ugu guulaha badan kubadda cagta, iyadoo uu horyallada LaLiga, Champions League, Bundesliga, Premier League iyo koobab kale oo maxalli ah dhamaantood soo hantay.
Sannadkii 2007 ayuu xirfaddiisa tababarenimada ka bilaabay Barcelona oo uu soo layliyey kooxdeeda da’yarta ee Barcelona B, waxaana ugu xigay oo uu u dallacay Barcelona, Bayern Munich iyo Manchester City.
Muddadaas waxa uu si fiican uga adeegtay suuqa iibka ciyaartoyda oo uu kasoo qaatay laacibiin uu ku dagaal-galay oo ka caawiyey inuu guulaha waaweyn gaadho.
Tirada ciyaartoyda uu lasoo saxeexday waxay tahay 73 ciyaaryahan oo ka mid ahaa kuwa ishu qabanaysay garoomada dhexdooda, laakiin dhamaantood may noqonin kuwo ugu shaqeeyey sidii uu filayay, waxaase intooda badan ay ahaayeen kuwii sababta u noqday in lagu tixgeliyo tababare guuleed.
Halkan waxa aanu idiinku soo gudbinaynaa 10-kii saxeex ee fashilka ku dhamaaday ee Pep Guardiola uu sameeyey, kuwaas oo uu kasoo bixiyey lacag badan laakiin ugu dambaynta la geliyey qaybta khasaaraha ee naadiyadiisa.
10. Danilo – Sannadkii 2017 ayay Manchester City kasoo iibsatay Real Madrid, waxayna kasoo bixiyeen £26.5 milyan. ‘
Laba sannadood oo uu joogay City, waxa uu u saftay 34 kulan oo Premier League. ugu dambayntiina waxa uu uga wareegay Juventus oo ay kaga beddesheen Joao Cancelo.
9. Jan Kirchhoff – Heshiis xor ah ayuu sannadkii 2013 ugaga soo wareegay Mainz isaga oo ku biiray Bayern Munich oo waqtigaas uu Pep Guardiola ahaa macallinka kooxda. 12 ciyaarood oo kaliya markii uu u ciyaaray muddo saddex sannadood ah, waxa uu sannadkii 2016 uga wareegay Sunderland.
8. John Stones – 2016 ayey Man City £50 milyan kaga soo iibsatay Everton, isaga oo sannadkaas noqday difaaca ugu qaalisan. Afar sannadood oo uu joogo City, waxa uu la’yahay boos joogto ah iyo kalsoonida dhabta ah ee Pep.
7. Martin Caceres – Pep Guardiola oo ahaa tababara Barcelona ayaa sannadkii 2008 kasoo iibsaday Villarreal iyadoo uu kasoo bixiyey £14.85 milyan.
6. Keirrison – 2009 ayay Barcelona £12.60 milyan kaga soo qaadatay kooxda reer Brazil ee Palmeiras.
5. Nolito – Manchester City waxay 2016 lacag dhan £16.20 milyan kaga soo iibsatay Celta Vigo. 30 ciyaarood oo uu u saftay waxa uu u dhaliyey lix ciyaarood oo kaliya.
4. Claudio Bravo – Barcelona ayuu kasoo qafaashay sannadkii 2016 iyagoo kasoo bixiyey £16.20 milyan. Waxa uu booska kala baxay Joe Hart laakiin waxa isagana kaydka u diray Willy Caballero ka hor intii aanu imanin Ederson.
3. Dmytro Chygrynskyi – Shakhtar ayay Barcelona kasoo iibsatay 2009 iyagoo kaoso bixiyey £22.50 milyan, waxaanu qorshuhu ahaa inuu u beddelo Caceres, laakiin 14 ciyaarood oo kaliya markii uu u saftay Barca, wuxuu dib ugu laabtay kooxdiisii hore ee Shakhtar.
2. Aleksandr Hleb – Isaga oo udub-dhexaad u ah Arsenal ayuu Hleb sannadkii 2008 u dhaqaaqay Barcelona oo ku iibsatay £15.30 milyan. 36 kulan oo kaliya ayuu u saftay muddadii uu joogay, isaga oo inta badanna kaydka ku jiray.
1. Zlatan Ibrahimovic – 2009 ayuu Pep Guardiola go’aansaday inuu Ibrahimovic soo iibsado, waxaanu ka bixiyey £62.55 milyan iyo waliba Samuel Eto’o oo la isku daray.
Khilaaf xooggan ayaa u dhexeeyey muddadii ay wada joogeen, dhibka u weyna waxa uu ahaa in Ibra aanu la jaanqaadin kubadda isku-dhiibka ee Tiki-taka iyo hab-dhaqanka Pep Guardiola.
45 ciyaarood oo uu u saftay waxa uu u dhaliyey 21 gool.